Disney's 12,99 $ oo ah soo-jeedinta dalabku aad ayey u wanaagsan tahay in la gudbo, laakiin ma "dili doonto" kuwa xafiiltama - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Disney's 12,99 $ oo ah soo-jeedinta dalabku aad ayey u wanaagsan tahay in la gudbo, laakiin ma "dili doonto" kuwa xafiiltama - BGR
Disney's 12,99 $ oo ah soo-jeedinta dalabku aad ayey u wanaagsan tahay in la gudbo, laakiin ma "dili doonto" kuwa xafiiltama - BGR
Markuu Disney ku dhawaaqay arrintaas adeegyadeeda qulqulka waxay ku kici laheyd kaliya 5,99 $ bishii mar ay u heli laheyd macaamiisha bisha Nofembar, waxaa cadaatay in Disney + ay ahayd hal qoondeyn. Xitaa haddii aad horayba ugu bixisay adeegyo kale, oo ay ku jiraan Netflix, HBO, Hulu, YouTube iyo Amazon Prime, inaad magacyo dhawr, Disney + waa wax ku darsan biilkaaga madadaalada billaha ah qiimahaan. Disney + waxay lahaan doontaa tiro ah tayo tayo leh dhammaan guryaha Disney, iyo sidoo kale waxyaabo badan oo asal ah oo aan lagu sii deyn doonin aagaga tartamaya. Tusaale ahaan, Disney + mar hore waa qayb ka mid ah wejiga labaad ee ugu weyn ee Marvel MCU, oo leh dhowr taxane oo horumarin ah.
Laakiin waxaa soo baxday in bilkasta bilkasta 5,99 $ aysan aheyn waxa Disney ay sifiican wax u qaban karto. Tani waa sababta oo ah bulshada Waxay soo bandhigtay ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo ku kacaya 7 $ dheeraad ah laakiin waxay fursad u siineysaa Hulu iyo ESPN +.
Haddii aad horay ugu qoran tahay Hulu iyo / ama ESPN +, qiimuhu waa 5,99 $ (oo leh xayeysiisyo) iyo 4,99 $ bil kasta siday u kala horreeyaan, waa inaad mar hore tixgelisaa inaad u dhaqaaqdo bil kasta 12,99 $ qorshaha helitaanka oo dhan, maxaa yeelay Adeeggu wuxuu ballan qaadayaa qiimo weyn oo qiimahan ah. Set Tani waxay si fudud u noqon kartaa isha koowaad ee madadaalada loogu talagalay macaamiisha qaar, kuwa kalena waxay tixgelin karaan xiriirkooda Netflix, HBO, iyo adeegyada kale ee tooska / tooska ah.
Haddii aad haysatid rukumado badan oo isugeyn ah oo aadan dhaafi karin, waa inaad weli tixgelisaa iibsashada Disney +.
Xirmadan cusub ee Disney + ayaa ka dhigaysa mid adag tartannada tartamayaasha, laakiin si sax ah uma "dili doonto" aagagga loo tartamayo. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah wararka xanta ah, rukunka HBO Max wuxuu ku kacayaa qiyaastii 17 dollars bishii, taas oo umuuqata inay aad qaali u tahay marka la barbar dhigo heshiiskii ay dhowaan shaacisay Disney. Laakiin HBO waxay leedahay taageerayaal badan oo daacad u ah adeegga cusub wuxuu bixin doonaa xitaa waxyaabo ka badan kan HBO Hada.
Apple weli ma aysan shaacin qiimaha TV-ga Apple +. Apple waxay lahaan doontaa tiro kooban oo barnaamijyada asalka ah marka la bilaabayo. Laakiin waxaa xiiso yeelan doonta in la arko haddii sameeyaha iPhone ku soo dari doono Apple TV + dalabyadiisa. Adoo culeys badan saaraysa adeegyada, Apple waxay leedahay fursado badan oo ay tahay in laga fiirsado xirmooyinka la tartami kara qandaraaska Disney ee 12,99 $.
Tusaale wanaagsan oo ah adeegga socodka oo Disney + uusan dili karin waa Amazon Prime, oo ay kujirto helitaan bilaash ah. Fiidiyaha Fiidiyaha. Macaamiisha qaaliga ah ee Amazon waa adeegyo aad u wanaagsan oo macaamiisha u oggolaanaya inay marin u helaan madadaalo kala duwan.
Sidoo kale, xirmada cusub ee Disney + waxay sidoo kale la tartami doontaa adeegyada telefishanka qaaliga ah ee qaaliga ah ee ay raadsadaan kuwa xarigga ka jara, oo ay ku jiraan kanaalada YouTube ama Google TV. Sling TV, inaad magacowdo dhowr ka mid ah xulashooyinka laga heli karo suuqa.
Markay noqoto tartan u dhexeeya shirkadahaan, Apple iyo Amazon waxay iibin doonaan rukhsadaha Disney + Disney iyada oo loo sii marayo aaladohooda socodka. Kama baqi doontid inaadan awoodin inaad iska diiwaangeliso baakadaha 'Disney + baakadaha si toos ah qalabkaaga Apple ama Amazon'.
Warka keliya ee xun ee aan halkan ku hayno waa macaamiisha caalamiga ah xilligan. Disney + waxay noqon doontaa heshiis gaar ah oo Mareykan ah in muddo ah. Ugu dambeyntiina, nooc ka mid ah go'ankan ayaa gaari kara suuqyo badan, maxaa yeelay Disney waxay dooneysaa inay dhoofiso labada Disney + iyo Hulu dalal kale. Helitaanka caalamiga ah ee ESPN + waxay noqon kartaa dhibaato badan marka la eego heshiisyada shatiga shatiyo adag ee dhacdooyinka isboorti. Laakiin tani waa mala-awaal saafi ah, maxaa yeelay Disney weli kama fekerin inay ballaariso adeeggeeda caalamiga ah ee qulqulka. Netflix iyo Amazon, dhanka kale, waxaa laga heli karaa suuqyo badan oo kale mana ka baqi doonaan tartan kasta oo ka dhaca Disney + dalalkan xilligan.
Daawadeyaasha Ruushka waxay jecel yihiin bandhigyada Mareykanka, oo ay ku jiraan "Game of carshiga" - BGR
Nintendo wuxuu lahaan lahaa xitaa moodooyin cusub oo loo yaqaan 'Switch mood' marka la diyaarinayo - BGR
LIVE Transfer Talk: Real pourrait payer 400 millions d'euros pour Mbappe